VaTsvangirai Vanoita Musangano weKuzeya Zvinetswa Mubazi reHutano
Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vaita musangano wechimbi chimbi wekuzeya zviri kunetsa pamwe nezvingaitwe mubazi rezvehutano. Musangano uyu, uyo wapindwawo negurukota idzva rezvehutano, Dr Henry Madzorera, pamwe nenyanzvi munyaya dzehutano.
Vachitaura pamusangano uyu, VaTsvangirai vati hurumende yavo yakazvipira kugadzirisa zvose zviri kunetsa mubazi iri, asi zivi zvinobudirira chete kana vanhu vakaita mushandira pamwe. Vatiwo huwandu hwevanhu vari kufa nechirwere chekorera, hunodarika huwandu huri kuburitswa pachena.
Sachigaro veHospital Doctors Association, Dr Amon Siveregi, vanoti vanobvumirana naVaTsvangirai kuti huwandu hwevanhu vari kufa nekorera hwakawanda kudarika huri kuburitswa nebazi rezvehutano richishanda pamwe chete ne World Health Organization.
Sangano re WHO rinoti kusvika pari zvino, vanhu vanodarika 3 950 vakafa nechirwere ichi kubva pachakatanga muna Nyamavhuvhu, uye vanhu 87 261 vakabatwa nechirwere ichi.
Marvellous Mhlanga Nyahuye weStudio7 aita hurukuro na Dr Siveregi kuti tinzwe maonero avo.
Hurukuro naDoctor Amon Siveregi